トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Stage chechina Danho "mumhanyi uye chaser (anyerere nguva, kurega kunotanga nguva)" uye
Kuburikidza nzira chaiyo
mapatya Seoul kuwana [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi ari nomwe mudariro, chaizvoizvo ari danho kukwira kuti fused mumwe mweya, chikuva chechina zviri kunorwadza nguva kuti ave. In Danho ichi, nokuti vaviri kuparadzana rinouya.
zvakasimba kudhumhana iri mudariro rechitatu, mushure mekusangana zvakadzama marwadzo kune mumwe, mumwe Zvinozorodza kwete kukunda marwadzo, uye kuvhiringidzika kuti mumwe akanga pakarepo kure kune rimwe bato, saka kudzinga mudzivisi I.
kure ichi, haufaniri kuti ndizvipete chero bedzi imi musarasa kuzvikudza pachake chakaparira kupesana rechipiri kusvika Danho rechitatu. Dzimwe nguva, zvinoita kuti aizoramba kuparadzana hurumende pamusoro kumbonyanya refu nguva.
Asi zvinonyatsorehwa Danho ichi hachisi kuti arambe kuomerera kune pati kuti vakaenda kamwe, Ini, kurongeka kwakadaro kunangisa munhu chisinga- zvokunamata kuwedzera yavo. Pasinei Kizukeru kune izvozvo, uchava chikuru muedzo kwechikuva wechina.
chimiro uye pfungwa kana kudzingirira zvakawanda kure enda Twin Seoul ukama hwavo
? mumhanyi uye chaser
uyo vaunganidza muupenyu uye kuda zvakaitika kare Chase, izvozvo anosika yakawanda kuramba. Zvadaro, manzwiro anoitwa uye nepfungwa kuva chisina kutsiga ezvinhu zvakasimba, asi kwete kuti vaizoramba zvakasimba anokumhan'arira.
Somugumisiro, mumwe akarova mwoyo uye kusava nomumwe nomumwe, uyewo ndinonzwa kurwadziwa simba nemuvengi waro. Kana iwe hauchafambi kutsungirira ichi, mumwe ane kuedza kutiza kubva ukama. Uye, mumwe mumwe wakanga uchibuda pamberi pakarepo meso, zvakuri kure angadzingirira nepaaigona kuedza vawanezve neimwe nzira mupikisi. In ukama ichi, uyo nani kutiza ari mumhanyi, zvakuri kure angadzingirira chichange nezvavo savakuru chaser.
? kutambura watizira
mumhanyi kutungamirira pakunamata nehope chaser Zvinenge vanovhiringidzwa tisingazivi zvakaitika. Uye, mumhanyi aienda vanofunga I ngaazvirambe, zviri nyore kana mhosva dzavo Dari mafi anokumhan'arira. Hurumende zvinorwadza chaizvo, zvingava avo sabvumika.
Zvisinei, kana uchinyatsoda maviri vanhu ari mapatya mweya, kuti mumhanyi asina kupfuura akatiza Ndakava ruvengo chinhu chaser. Ndichiri kuda zvikuru, kunzwa kutya kutarisa pachangu kuti haana kuziva chaser, uri unofanira atiza. Sezvo ukama chinhu mweya pamwero, kwete chimwe chinhu kunogona vakafunga kuti kuedza kuvandudza.
Naizvozvo, Chaser, unofanira kurasa kamwe nokuzvitutumadza ari mumhanyi. Uye, kana isu yakawedzera kuti rodzai yavo, tinokwanisa kugamuchira kwerumutsiriro pakunamata.
chikuva chechina paunomuka mune mumwe nomunguva, zvakare nokudhiraivha pa pachangu nokusiya ari mumwe, zvinogona kunzi kuva zvechokwadi nguva kuwedzera yavo kuitira kuti vakwanise rudo pachako. Kana Norikoere iyi, zvinokwanisika kuwana chisinga- mumwe womudzimu, uye vakasvika kumusoro ikoko pakupedzisira I kukwanisa mberi kune chinotevera pavaipfuura mapatya mweya.
Kana isu, tinogona kugamuchira mumwe nehope pakunamata.